DAAWO: 2 Sanno ka dib, Abiy-gii qaatay Bilada Nabada Aduunka, waa sidee hadda xaalkiisa?
October 11, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 10
ADDIS ABABA(P-TIMES) – ABIY AHMED ALI, 2 sanno kahor, 2019-kii wuxuu noqday Halyeey iyo Nabadoon loo caleema-saaray Biladda Aduunka, October sannadkaas ayuu ku-guuleystay in uu noqdo ruuxa sannadkaas nasiibka u yeeshay abaalmarinta ay bixiso dawladda Norwayd “NOBEL PEACE PRICE”, xiligaas waxyaabaha u soo waariday in ruux Afrika jooga siiba Geeska Afrika oo dadkiisu deris la yihiin dagaalo & gaajo uu helo biladan ayaa ka dhignayd soo afjarida colaad u dhaxeysay dalkiisa Itoobiya & Eritrea wax ka badan 20 Sanno, galaafatay nolosha in ka badan Kumanaan qof iyo xataa xariirka qoysas ehelo ah.
2021-ka hadda oo la joogo, marxaladda Itoobiya waa mid laga soo tabinayo dagaalo dhimasho badan ku daadinayo, Gaajo, macluul ay sababeen colaadaha iyo khilaafyo waa weyn oo halis galinaya daganaanaha gobalka Geeska Afrika oo dhan.
Hadal jeedintii Abiy Axmed ee madasha gudoomida Bilada Nabadda Aduunka, wuxuu diiradda hadalkisa oo socday 21 daqiiqo ku saaray nabadda iyo in uu ka sheekeeyo marxaladii ka dhacday deegaanka Badame ee ay isku hayeen Eritrea & dalkiisa Itoobiya, isagoo waliba kamid ahaa askartii dagalkaas ka qeybgashay.
Weedhaha Abiy ee ka sheekeynta nabaddu, maanta agtiisa kuma weyna, waxayna is hayaan kooxda xukunka uu kala wareegay ee TPLF, kuwaas oo ilaa November 2020-kii ay hardamayaan, Nabadoonkii 2019-kii la caleema-saarayna isla reer Galbeedkii cumaamaday waxay kusifeynayaan Dagaal Ooge maanta, xili ay is hayaan kooxdii abuurtay dagaalkii uu dhameyntiisa Billadda ku helay.
5sanno oo cusub ayaa dhawaan loo dhaariyey Abiy Ahmed oo uu sii haynayo talada Itoobiyada Qowmiyadaha badan, laakiin sanooyinkaas waxay badankood noqon doonan kuwa uusan sahal iyo tamashleyn kudhaafi doonin, Axad & Jimce, habeen iyo maalin, wuxuu sheegay dhawaan in ay shaqo adag sugayso hurdadana ay kala caagan yihiin.
Abiy Axmed 45 jirka ku dhashay magaalada Beshasha ee dalka Itoobiya, cida ugu dhaw ee ay waqtigan is hayaan marka gudaha laga tago waa Mareykanka oo doonaya in uu raaco wadada ay u jeexeen iyo isaga oo naawilaya awood xoogan & Barriga oo uu garab ka helo.
Abiy ahmed deserves another so-called Nobel peace prize for punishing wayans, shaqo fiican baad haysaa, east AFRICA is a better place to live after removing wayans from power…
Kooxihii tacsida u fadhiyay hargaisa iyo garoowe bad news for them…
Abiye AGOONTII TIGREY ayaa u booranays.mid kastoo TIGREE gabar qurux badan u geyn jiray,shaqadiisii fataalnimada ayuu waayay.
Togree inta ay Somali u gaysatay ayaa laga jarayaa.
ABIYE WAS TIGREE.ZINJIBARLAND IYO MARQAANLAND TACSIDA ISKA DAAYA.
Tigree aad dadkiina ku layn jirteen ama dawladnimada Somaliya kula dagaalami jirteen ha u barooranina.
Muxuu ku qaatay ? ma in uu dad laaayay caruur iyo maato qixiyay
Adigu caruurtii Amisom dhashay ayaad tahay , adeerkaa waa askari Ruwanda ka yimid kula yaabi mayno. in Amisom.
Amisom waligaa ayay kula joogaysaa xor noqon maysid
magaalada Muuq disho dhibaato aad u xun ayaa maanta ka dhacday waxaa isku dilay ciidanka macawislay iyo mooryaantii turkigu kabaabka siiyay dagaalkaa waxaa ku dhintay 20 qof waxaa dhaawac ah 70, waxay isku dileen booos yar, ciidanka Ugaandha ayaa iyaguna kaarayaan gaadiid dagaa jiirsiiyay dad masaakiin ah maydkooda ayaa banaanka dhigeen cid ka hadasha ma jirto..
Ciidanka Ugaandha ayaa gaadiid dagaal dad masaakiin ah jiirsiiyay, qaarna madaxa ka toogtay.. cid ka hadshay ma jirto
Adigu waxaad tahay.. Looma ooyaan.. Askari Ugaandhays ah haduu xabad ku dhufto aad dhimato deero deero hirdiyi mayso , waa iska caadi noooooh, dameer dhintay aad tahay.
Amxaaro,Tigre iyo Oromo waa isku-mid.
Kuligood oo la isku-daray Abiye ayaa Somalia uga xun ugana khatar badan.
Beesha Daarood hadba key la jiraan bay rabaan in loo wada dhaanteeyo.
Waa indho-ku-garaadlayaal si fudud wax u jeclaada waxana u naca.
Tigre hadda ma jabin, jabkoodu wuxuu bilaabay 2007 iyo waagii Ina Yuusuf Yeey
( Naarta alla ha ku fogeeyee )
Maytida habaarka kaddaa xoolayahow akhlaaqda xun. Cabdullaahi Yusuf kumanaan baa janaazadiisa kasoo qayb galay, malaayiina waa u’ducaysaa maalin-kasta oo sadaqaa loo bixiyaa! Ku ducayso markaad dhimatid in sida Cabdullaahi oo kale janaazadaada loosoo xaadiro oo malaayiin soomaaliyeed kuugu ducayso.